NCA-S EAO | 4th Online Video Conference of Framework Agreement for NCA Implementation Working Group Meeting held this morning
4th Online Video Conference of Framework Agreement for NCA Implementation Working Group Meeting held this morning
May 30, 2020 04:00 PM
4th Online Video Conference of Framework Agreement for NCA Implementation Working Group Meeting has been held since this morning. In his Opening Remarks, Col. Sai Ngern says, "It isagood sign for the peace process that the Government, Tatmadaw and EAOs have been mutually cooperating for the Prevention and Control against COVID-19."
The opening remarks of Col. Sai Ngern is as follows:
NCA အကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာ မူဘောင်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ အစည်းအဝေး Online Video Conference(စတုတ္ထအကြိမ်)တွင် ပြောကြားသည့် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်မှူးကြီး စိုင်းငင်း၏ နှုတ်ခွန်းဆက် အဖွင့်အမှာစကား
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မေလ (၃၀) ရက်
NCA အကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာ မူဘောင်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့အစည်းအဝေး Online Video Conference (စတုတ္ထအကြိမ်) သို့ Online မှတဆင့် တက်ရောက်လာကြတဲ့ NCA-S EAO ခေါင်းဆောင်များ ကိုယ်စားလှယ်အားလုံး ကျန်းမာကြပါစေလို့ နှုတ်ခွန်း ဆက်သပါတယ်။
လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် သုံးသပ်ခြင်း၊ ပြည်ထောင်စုသဘောတူစာချုပ် အစိတ်အပိုင်း (၃) မှာ ထည့်သွင်းချုပ်ဆိုမယ့် အကြောင်းအရာများအား ဆက်လက်ဆွေးနွေးခြင်း၊ သင့် တော်တဲ့မကြာမီကာလမှာ ၂၁ ရာစု ပင်လုံ စတုတ္ထအစည်းအဝေး ကျင်းပ နိုင်ရေးနဲ့ Covid-19 ကပ်ရောဂါ ဆိုင်ရာ ကာကွယ်တားဆီးရေးလုပ်ငန်းတွေကို ဒီနေ့အစည်းအဝေးမှာ ဆွေးနွေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
Covid-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် အခြားလုပ်ငန်းများနည်းတူ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်လည်း ယာယီ တုံ့ဆိုင်းနှောင့်နှေးသွားခဲ့ရပေမယ့် တစ်ဖက်မှာလည်း Covid-19 ကပ်ရောဂါ ကာ ကွယ်တားဆီးထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက် အစိုးရ၊ တပ်မတော်နဲ့ EAO တို့ ကြား အပြန်အလှန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ လက္ခဏာပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ အစိုးရနဲ့ တပ်မတော်ကနေ EAO တွေဆီ Covid-19 ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်တားဆီးထိန်းချုပ်ရေးအတွက် ကျန်းမာရေး ပစ္စည်းကိရိယာများ ပေးအပ် ခြင်းဟာလည်း နွေးထွေးတဲ့ ဆက်ဆံရေးကို မီးမောင်းထိုးပြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Covid-19 ကာလအတွင်း တပ်မတော်မှ သုံးလကျော်ကြာ တစ်ဖက်သတ် အပစ်ရပ် ကြေညာခဲ့ခြင်း က လည်း ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို အ ထောက်အကူပြုနိုင်စေလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒီအတောအတွင်းမှာ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးကျင်းပနိုင်ခြင်းက ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကပ်ရောဂါ ကူးစက်မှုများ နည်းပါးသွားခြင်းကို ပြသရာရောက်သလို အတန်အသင့် ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းဟုလည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။
လာမယ့် နိုဝင်ဘာလ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ- ၂၁ရာစု ပင်လုံစတုတ္ထအစည်းအဝေးကို မလွဲမသွေ ကျင်းပရမှာဖြစ်လို့ ညီလာခံအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများကို ပြုလုပ်ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ Covid-19 ကပ်ရောဂါကူးစက်မှု အရှိန်ကျသွားသလိုရှိပေမယ့် မပေါ့ဆ၊ မပေါ့လျော့ဘဲ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း အားလုံးက ဆက်လက် လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားကြပါလို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။